Maleyshiyaad ka tirsan Argagixisada Al shabaab oo lagu dilay Shabelaha Dhexe | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maleyshiyaad ka tirsan Argagixisada Al shabaab oo lagu dilay Shabelaha Dhexe
Degaanka Basra ee gobolka Shabelaha dhexe ayaa saaka howlgal balaaran oo ay ka sameeyeen ciidammada xoogga dalku waxaa ay ku dileen tiro ka tirsan maleyshiyaadka argagixisada ah ee Al shabaab kuwa kalena waa ay dhaawacmeen kuwaas oo isku dayay in ay ka horyimaadaan gulufka balaaran ee ciidanku ay halkaa ka wadeen.
inta la xaqiijiyay 3 ka mid ah maleyshiyaadka la marin habaabiyay ayaa dhimatay afar kalena waa ay dhaawacmeen ka dib weerar ay ciidanka xoogu ku qaadeen goobo ay ku dhuumaaleysanayeen oo ku taalaa degaankaas Basra waxaana jira maleyshiyaad nolosha lagu qabtay.
“ciidanku waxaa ay sameeyeen howl gal lagu sifeynayo cadawga waxaa ay dileen sadax maleyshiyo afar kalena waa ay dhaawaceen waxaana hadda wali ay sii baacsanayaan firxadka kuwii cararay waxaa jira tiro maleyshiyo ah oo aan qabanay intii howl galku socday”ayuu yiri Abaan duulaha ciidanka xoogga dalka Gen Cabdullahi Cali Caanood.
waxaa uu qayb ka yahay howl galo balaaran oo ciidanku dhawanahaanba ay ka wadeen Gobolada shabeelooyinka sida uu sheegay abaan duuluhu waa sii soco doonaa ilaa la cirib tirayo cadawga dhibaateynaya shacbiga Soomaaliyeed.
Previous articleGolaha Wasiirrada oo ansixiyay xeerka siyaasada dhalinyarada Qaranka
Next articleQoysas Hantidii ay lahaayeen ku waayay gacanta Kooxda Al-Shabaab oo codsi u diray Dowladda+(Sawiro)